DHIRTA APPLE "SINAP ORLOVSKY": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, XEERARKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Sida loo koro noocyada dhirta tufaaxa "Sinap Orlovsky" ee beertiisa
Waxyaabaha kala duwan ee Apple "Sinap Orlovsky" Bannaanka ayaa aad loogu mahad-naqayaa ma aha oo kaliya dhadhanka ugu wanaagsan, soo bandhigida miraha, nolosha shelf dheer, laakiin sidoo kale quruxda geedaha ubax.
Taariikhda noocyada tufaaxa tufaaxa "Sinap Orlovsky"
Kala duwanaanta tufaaxa "Sinap Orlovsky" waxaa la soo saaray 1955-kii Machadka Cilmi-baarista Dhammaan Ruush ee Dalagyada Miraha. Waxaa jirey geedo tufaax ah "Michurin Memory" iyo "Northern Synapse". Ka shaqeeyey abuurista noocyo: N. G. Krasova, V. K. Zaets, E. N. Sedov, T. A. Trofimova.
Darajada ayaa caan ku ah beeraha warshadaha, iyo gaar ahaanba. Khudaarta Apple waxay caan ku yihiin qiimaha sarreeya ee nafleyda iyo dhismooyinka qurxoon ee qurxoon.
Waxaa kale oo xiiso leh in laga akhriyo noocyada ugu badan ee tufaaxa: "Bogatyr", "Orlik", "Welsey", "Spartan", "Riyo", "Melba", "buuxinta cad", "Candy", "Mantet", "Antonovka iyo Sunrise "iyo" Semerenko ".
Dhirta Apple "Sinap Orlovsky" waxay leeyihiin sharaxaad ku saabsan sida geedo ula socdaan aad u weyn oo cabbirka iyo cabbirka.
Waxay leeyihiin taajir ballaaran iyo laamo waaweyn. Laanta ugu muhiimsan ee taajka waa dhif - taasi waxay u fududeyneysaa daryeelka geedaha waxayna hubisaa ururinta dalagyada tayo sare leh. Laakiin inkastoo tani, geedka tufaaxu wuxuu u baahan yahay manjooyin xilliyeed. Laamaha ugu weynaa waxay ku koraan xagal quman, laamoodyada ayaa kor loo qaaday. Caleenta geedaha tufaaxa waa qallaf iyo cawl. Caleemaha dhirta waa midab madow, oo leh caleemo ballaaran, caleemo waaweyn, kuwaas oo lagu gartaa qaab naadir ah iyo midabka cagaarka madow. Qulqulaya burooyinkeeda waaweyn ee midab casaan leh.
Miraha Apple waa kuwo waaweyn, oo wata, leh xoog leh, dhalaalaya, dusha sare leh. Midabka midhaha geedka tufaaxa "Sinap Orlovsky" waa mid huruud ah-cagaaran xilliga beergooyska, iyo dahab-jaale ah inta lagu jiro xilliga Bisaylkiisa. Abuurka miraha waa bunni, yar yar.
Ma taqaanaa? Marka la eego cabirka dhadhanka, qiimeynta celceliska dhadhanka miraha ee kala duwanaanshahan gaar ahaaneed waa 4.7 dhibcood.
Jidhka midabka cagaaran ee midabka cagaarka ah waxaa lagu kala soocayaa casiir, caraf udgoon, dhadhan-macaan.
Kala duwan ayaa leh faa'iidooyinka soo socda:
miro tayo sare leh;
nolol wakhti dheer oo khudrad ah, iyada oo aan lumin dhadhanka iyo muuqaalka.
Ma taqaanaa? "Sinap "waa magac caadi ah ee dhammaan noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa ee Crimean.
Dhirta tufaaxa ee waaweyn Sinjiga Orlovsky, oo ah dhibaato ayadoo ku koray aagagga yar yar;
u nugul qadhaadh (haddii ay jirto wax yar oo calcium ah ee ciidda);
fruiting ka dib markii beerto waxay dhacdaa sannadka afraad;
si dhexdhexaad ah ayuu isaga difaacaa cayayaanka, cudurada iyo qolofta.
Shuruudaha iyo aagga sii kordhaya
Marka la eego in muddo ka dib, sapling koraya weyn, waxaad u baahan tahay inaad hesho meel meel ku habboon beeritaanka. Masaafada u dhaxaysa hal geed ilaa iyo meel kale waa inay ahaataa ugu yaraan 7 mitir. Dhirta Apple waxay dareemaysaa fiicnaan qorraxda, laakiin waxaa lagu beeray qayb ahaan qayb ahaan. Haddii ay jirto iftiin la'aan, waxaa suurtagal ah in la yareeyo dhalidda geedka iyo sonkorta ee miro.
Horumarka caadiga ah, waxaa fiican in la beero geedka tufaaxa:
on chernozem leached;
loamy iyo carrada ciidda;
Iyadoo bacriminta sannadlaha ah, geedka tufaaxa ayaa lagu beeray ciidda ciidda.
Aashitada ciidda waa inay daciif tahay - si ay pH 5.7 - 6.0, ciidda - neefta iyo qoyaan-qoyan, waa in aysan jirin biyo-xirmo. Iyada oo ay jirto hanjabaadda hadda jirta ee daadadka, waxaa lagama maarmaan ah in la daadiyo ama lagu beero buurta.
Waqtiga ku habboon ee lagu beeri karo kala duwanaanta tufaaxa Orlovsky Synaph waxaa loo tixgeliyaa bartamihii Sebtembar waa bartamaha bisha Oktoobar. Laakiin sidoo kale waxaad geli kartaa guga, ka dibna dhulku wuxuu bilaabmaa qeybta hore ee bisha Abriil.
Hannaanka tallaabo tallaabo ah ee geedo beerto
Beeridda waa in la sameeyaa iyada oo tixgelinta ah in seedling uu si dhakhso ah u korayo. Geedku wuxuu u baahan yahay meel ku filan oo iftiin leh iyo meel ballaadhan, sidaas darteed waa in laga beeraa dhir dheer.
Waa muhiim! Guga, beerto waa in la sameeyaa marka aysan jirin wax khatar ah oo dhaxan, haddii kale geedo ayaa laga yaabaa inay dhintaan.
Xaaladaha ugu muhiimsan ee laga beerto dhirta tufaaxa Orlovsky waa:
Qoto dheer ee ceelku waa inay ahaataa ugu yaraan 80 cm, Wareegga loo baahan yahay iyo dhererka daloolka waa inuu yahay 1 mitir.
Meelaha waa in la sameeyaa 14 maalmood ka hor inta aan la beeri.
Si loo daboolo hoose ee ceelka leh qashin.
Sii dheecaan dheeraad ah oo dhoobo leh ama xabbado lebbiska. Waxay u baahan yihiin inay ku shubaan hoose ee godka.
Dhulka waxaa lagu qasan yahay ash qoryo iyo digada. Tirada dhulka iyo bacriminta waa inay ahaataa 4: 1.
In isku dar ah dhamaystiran waa in lagu daraa sulfate potassium - 40 g iyo superphosphate - 80 g.
Isku dar ah oo dhan ayaa si fiican loo isku qasan yahay waxayna buuxsantay ceelka. Tallabadan ka dib, godka waa in la buuxiyaa 1/3.
Markaas waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dhulka ku yaal bartamaha daloolka, sameynta buurta 20 cm.
Iska hubi xididdada geedka tufaaxa "Sinap Orlovsky" ka hor intaan la beeri. Ka saar xididdada qalalan iyo kuwa waxyeelloobay. Ku rid shinnida biyaha 5 saacadood - tani waxay saamayn ku yeelanaysaa koritaanka iyo badbaadada geedka.
Ku rid seedling ee godka si qoorta xididku ugu yaraan 6cm u ka fog yahay dhulka.
Waa lagama maarmaan in la dhigo taageero meel u dhow geed, taas oo ah sapling waa in lagu xiraa.
Ka dibna toosi xididdada oo si siman u dabooli dhulka, ma aha wax badan oo tamping ah.
Ka dibna ku shub seedling biyo. Tani waxay u baahan doontaa ilaa saddex baaldiyo oo biyo ah.
Horseed, bakayle, lo'da, doofaarka iyo digada idaha waxaa loo isticmaali karaa Bacriminta geedaha tufaaxa.
Tilmaamaha daryeelka xilliyeed
In kasta oo xaqiiqda ah "Sinap Orlovsky" waa noocyo kala duwan oo aan geedi-socodsiin lahayn, waxay u baahan tahay daryeel dheeraad ah. Marka koritaanka xoogga ah ee geedku uu bilaabo, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laamaha.
Qaboojinta geedka tufaaxa
Kala duwanaan tufaaxan ayaa ah mid isku-dhafan. Dhirta si joogto ah ayaa loo hubiyaa iyadoo aan loo eegin xaaladaha cimilada iyo cimilada. Haddii ay jiraan geedo tufaax ah oo noocyo kale ah oo agtiisa ah, tani waxay kordhin doontaa dhalidda kala duwan ee noocaas ah.
Daaweynta ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada
Si aad u adkaato xajin iyo xaaqin "Sinap Orlovsky" ayaa leh degganaanshaha dhexdhexaadka ah
Macaanka dhadhanka waa cudur fungal ah. Waxaa muuqata muuqaalka sida ubaxyada cad (fungus) caleemaha. Waxaa lagugula talinayaa in laga hortago infekshanka iyo faafitaanka xayrta budada ah, haddii kale waxay gebi ahaanba ku dhuuqeysaa geedka. Sulfur Colloidal iyo xeryaha copper ayaa loo isticmaalaa si looga hortago oo loo burburiyo nooca fungus. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la burburiyo qaybaha ay saameeyeen geedka. Goobaha manjooyin waxaa lagu daboolaa foorjiga dhirta dhalinyarada ah, marsada lime - dadka waaweyn.
Jeex - nooc ka mid ah fungus kaas oo u muuqda sababtoo ah qoyaan ama hawo-dari sare ee taajka. Kabuubka ugu horeeya wuxuu infakshiyaa caleemaha, ka dibna midhaha. Calaamadaha caabuqa waa: muuqaalka kore ee cagaar-brown on caleemaha, iyo ugu dhakhsaha badan on miraha. Ka hortagga muuqaalka kalluunka fangaska - jeermi-dilista iyo bacriminta carrada.
Kala duwanaanta tufaaxa ee Orlovsky Synaph waxay sidoo kale u nugul yihiin cudur loo yaqaan koontada qallafsan. Sababta horumarinta cudurkan wuxuu noqon karaa qoyaan sare, goosashada goor dambe, kaydinta habboon ee miraha, wax yar oo calcium ah ee ciidda, iyo sidoo kale Bacriminta nitrogen xad-dhaaf ah. Cudurku wuxuu isu muujiyaa qaabka nabarada madow ee madow oo waxay saameyn kartaa uurjiifka labadaba on geedka iyo inta lagu jiro kaydinta. Si looga hortago, dhirta ayaa la buufiyaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee leh kaloorum chloride. Si looga hortago infekshanka, waa lagama maarmaan in la goosto xilliga loogu tala galo si sax ahna u keydiso midhaha
Si loo ilaaliyo soosaarka geedaha tufaaxa, "Sinap Orlovsky" waa lagama maarmaan in la hubiyo waraabinta saxda ah. Xilliga xagaaga iyo guga, geedaha waxaa la waraabiyaa ugu yaraan 1 jeer wiigii. Hal geed wuxuu u baahan yahay ilaa 3 baaldiyo oo biyo ah. Wixii qeybinta lebiska ee qoyaanku waxay u baahan yihiin inay jebiyaan ciidda ka dib waraabinta.
Dhirta Apple "Sinap Orlovsky" waxay u baahan tahay bacriminta ma aha oo kaliya inta lagu guda jiro beerashada, laakiin sidoo kale inta lagu jiro daryeelka daryeelka geedka.
Dhirta waxaa la quudiyaa afar jeer sanadkii:
dhammaadka wakhtiga qaboobaha;
marka la dhammaystiro dhismaha kelyaha;
ka dib markii ubax;
marka la goosto.
Qawaaniinta bacriminta Apple:
Ka dib markii la beero, geedka waxaa la bacrimiyey guga soo socda iyadoo isku dar ah digada iyo ciidda oo ah saamiga 700 g halkii 1 baaldi.
Iyada oo ay soo baxdo burooyinkeeda, HOL waxay u googooyaa geedka meel u dhow jirida, iyo ciidda waa la qodayaa.
Ka dib xilliga ubax, geedka waxaa la bacrimiyaa xal bacrin ah. Waxay ka kooban tahay (10 litir oo biyo ah): Hoor - 60 g, superphosphate - 100 g, kalsiyum - 40 g.
Marka dalagga la goosto, geedkii tufaaxa Sinap Orlovsky waxaa la bacrimiyey xal of superphosphate: 10 litir oo biyo ah iyo 40 g oo ah superphosphate.
Marka koritaanka firfircooni bilowdo, laamaha geedaha yar yar waxay u baahan yihiin in la gooyo. Dhammaadka sanadka, kaliya saddex meelood oo ka mid ah laamaha waa in la gooyaa. Gooyo geedo yaryar waa 20-25 cm. Dhamaadka sanadka ayaa la sameeyaa si la mid ah in laamaha la socdo saddex heerar. Mustaqbalka, geedka ayaa la gooyaa, sidaa daraadeed hal kormeere ayaa weli ah. Gooyo geedo tufaax ah oo baaluq ah ayaa lagu sameeyaa 40-45 cm, hubso inaad soo saarto laamood qalafsan oo qallalan.
Badbaadinta jadeecada iyo jadeecada
Muddadii u dhexeysay Nofeembar ilaa Disembar, daryeelka waa in loo qaado si loo ilaaliyo geedaha tufaaxa jadeecada iyo bakaylaha. Waxay u egtahay jilbaha geed, oo ka baxaya jirridda qaawan, taas oo ah sababta geerida geedka.
Tijaabooyinka Kontoroolka Cayayaanka:
Xayndaabka xuddunta ee mesh a mari bir silig a. Shabaqa dhererkiisu yahay 120 cm waa ku haboon yahay, waxaa wanaagsan in dhulka lagu aaso dhulka 30 cm ka hor inta aan la qaboojin, waxaad ku duubi kartaa foornada iyadoo la dareemayo duufaan, dhejis ama polyetylen. Habka isku midka ah ee wax ku oolka ah waxay noqon lahaayeen inay ku duubaan jirridda laamaha geedaha.
Isticmaalka wakiilada caydha ayaa sidoo kale ka caawin kara xalinta dhibaatadan. Waxaad ku xiran kartaa bacaha balaastigga ah ee laamaha hoose; jarjarrada ka soo daasadaha, ku dheji xargaha oo iyaga ku laalaa laanta hoose si ay u abuuraan buuq ayagoo garaacaya midba midka kale. Waxa kale oo aad ku xiran kartaa dhalooyin qoto dheer oo ay ku ridaan naphthalene - waxay ka cabsiineysaa jiirka.
Apple Tree "Sinap Orlovsky" waxay leedahay dhalidda geed weyn oo weyn ilaa 200 kg oo miro ah. Muddada dareenka laga saari karo miraha kala duwan ee tufaaxan waa dhammaadka Sebtembar. Miraha waxaa lagu gartaa ilaalinta wanaagsan ilaa dhammaadka guga, sababtoo ah waa kala duwanaanta qaboobaha tufaaxa.
Waa muhiim! Laguma talin in la goosado ka hor inta aan la gaarin xilligaas, waxay keeni kartaa hoos u dhaca nolol shelf iyo sii xumaanta dhadhanka.
Tufaaxtu waxay u baahan yihiin in lagu kaydiyo sanduuqyada alwaaxda qol qallalan oo qalalan. Miraha waxaa lagu duuduubay warqad ama rusheeyeen jajabyo alwaax.
Soo-ururinta, waa in la sheegaa in noocyada tufaaxa Sinjiga Orlovsky ay soo saartaa dalag tayo sare leh oo ballaaran leh dadaal yar. Ka dib talooyin, waxaad ku kori kartaa geed caafimaad leh oo qurxin doona beertaada, iyo midhaha ay kuugu farxi doonaan dhadhan fiican iyo aragti cajiib ah.